November 4, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Juventus, Barcelona iyo Chelsea oo guulo gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray Champions League… SAWIRRO
Cayaaraha November 4, 2020
(Yurub) 05 Nof 2020. Waxaa caawa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan ee ka tirsan kulamada saddexaad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21. Kooxaha Juventus, Barcelona, Manchester United, Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa ka mid ahaa kooxihii ugu muhiimsanaa ee caawa ciyaaray kulammadii koobka horyaallada Yurub. Kooxda kubadda Sii akhriso
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo soo gaaray Muqdisho.
Soomaaliya November 4, 2020
Muqdisho (SONNA)- AMISOM ayaa sheegtay in ciidan cusub oo boolis ah kuwaas oo ka yimi dalka Ghana ay Muqdisho soo gaareen. Ciidankan oo qeyb ka ah booliska AMISOM ayaa waxaa la geyn doonaa magaalada Beydhabo ee xarunta Gobolka Baay. Ciidanka ayaa waxay qeyb ka qaadan doonaan sugidda amaanka doorashada Soomaaliya, iyaga oo ka barbar shaqeyn […]Sii akhriso
Shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada oo Maalinkii Labaad Galay.
Muqdisho (SONNA)- Shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada Xukumadda Federaalka Soomaaliya oo maalintii Labaad galay ayaa looga hadlayaa tiirarka Barnaamijka Xukuumadda, Xiriirka wada shaqeyneed ee golaha iyo hay’adaha kale ee dowladda, ahmiyadda Daahfurnaanta, Isla xisaabtanka hay’adaha dowladda iyo Qorshaha horumarinta qaranka. Shirka Banbaxa oo uu Sii akhriso
Man United oo guuldarro kala soo kulantay kooxda Istanbul Basaksehir oo ay booqatay… +SAWIRRO
(Yurub) 04 Nof 2020. Manchester United ayaa guuldarro kala soo kulantay kooxda Istanbul Basaksehir oo ay booqatay, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada saddexaad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 aay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Istanbul Basaksehir. Daqiiqadii 13-aad Sii akhriso
Shaqooyinka November 4, 2020
Countries: Ethiopia, Uganda, United Republic of Tanzania Organization: Farm Radio International Closing date: 18 Nov 2020 **Position Title: Regional Program Officer (East & Southern Africa) Position Location: Addis Ababa, Ethiopia; Arusha, Tanzania; or Kampala, Uganda Reports to: Regional Program Manager Works closely with: Senior PD Manager, Director of Operations, Sii akhriso
Carona Virus oo si wayn u saameeyey waxbarashada carrurta barkacayaasha ah “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)-Dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan xeryaha dadka soo barakacay ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay saameyn wayn kala kulmeen cudurka Corona-virus oo dunida fara ba’an ku haya. Dadkan oo nolol ahaan aad uga liita dadka kale ee wax heysta ayaa cudurka kala kulmay dhibaatooyin ay ka mid yihiin shaqa la’aan, Waxbarasho la’aan, oo […]Sii akhriso
Country: Ethiopia Organization: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Closing date: 18 Nov 2020 Invitation to Bid Reference No: 83368207 The Covid-19 global pandemic has resulted in unprecedented disruption of the health, social and economic order of the world and that of Africa. Its direct impact on health has already resulted in the Sii akhriso
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo hambalyo u dirtay Guddoonka cusub ee Baarlamaanka Hirshabeelle
Muqdisho-(SONNA)-Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee Xukuumada Federaalka Soomaliya ayaa hambalyo u dirtay Guddoonka Cusub ee ay doorteen Baarlamaanka labaad ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle. Wasaarradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ayaa sido kale waxaa ay hambalyo iyo bogaadin u dirtay Guddigii Qabanqaabada Sii akhriso
Bernd Schuster oo Tilmaamay halka ay ka liidato kooxda Real Madrid
(Madrid) 04 Nof 2020. Tababarihii hore kooxda Real Madrid ee Bernd Schuster ayaa muujiyay inuusan ku qanacsaneyn waxa ay Los Blancos ku soo bandhigtay tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Los Blancos kuma aysan bilaaban olalaheeda heerka group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan. waxaana saddexdii kulan ay soo ciyaartay laga dhaliyay 7 gool, Sii akhriso
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo u yeeray inay shaqada ku soo laabtaan saddex Jeneraal
Muqdisho-(SONNA)-Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu yeeray in shaqada ciidanka ay ku soo laabtaan 3 Jeneraal oo uu horay shaqada uga joojiyay. Saraakiisha loo yeeray ayaa kala ah: Lt. Gen. Bacha Debele Lt. Gen. John G. Meskel Lt. Gen. Ababaw Tadesse Arintan ayaa imaaneysa xilli xaalad deg deg ah oo lix […]Sii akhriso